Jesu, azere noMweya Mutsvene, akadzoka kubva paJorodhani akatungamirirwa noMweya mugwenga, apo mazuva makumi mana akanga anoidzwa nadhiabhorosi. Haana chaakadya pamazuva iwayo, uye pakupera akanzwa nzara.
Chekutanga, anorega kurukura chaiyo apo tiri mumamiriro Luke's vhangeri. A shoma yapfuura, muchitsauko matatu, Johani Mubhabhatidzi ari kuparidza nezvaJesu uye achibhabhatidza vamwe, uye Jesu pachake anouya kuzobhabhatidzwa naye. John yave achibhabhatidza yakawanda vanhu, asi apo Jesu anobhabhatidzwa chinhu chakasiyana chinoitika. Mweya Mutsvene anoburukira pane pake mumuviri wakaita senjiva; uye inzwi rinobva kumatenga richiti, "Ndiwe Mwanakomana wangu unodikamwa; nemi wandinofarira. "Saka pano isu Mwari kuzivisa Jesu kungova muprofita munhuwo, kungova Mesiya; Jesu ndiye Mwanakomana chaizvo waMwari.
Ataura kwatiri pamusoro kuzivisa ichi kubva kuna Mwari, uye asati kutiudza chii Mwanakomana waMwari akabhabhatidzwa achaita, Kufanana rinotipa dzinza, kutiudza pamusoro Jesus' dzinza. The dzinza anoenda yose nzira kudzokera Adam. Saka pano tine Ishe Jesu, ndiani Mwanakomana waMwari waMwari kwete chete, asi Iyewo waAdhamu, Munhu wokutanga chaizvo. Jesu akasiyana nevamwe. Jesu ndiye Mwari, murume.
saka, uyo nani kutarisa kudzidza kuti tinofanira kuita sei kuti muedzo? Apo tinotarisa mundima mbiri idzi, tiri kuenda kutarisa zvinhu zvitatu tinofanira kuyeuka patinosangana nemiedzo.
ini. Mwari Inokutendera uye Anoshandisa Muedzo Sezvo Chikamu Plan Rake (1-2munhu)
Jesu, azere noMweya Mutsvene, akadzoka kubva paJorodhani akatungamirirwa noMweya mugwenga, apo mazuva makumi mana akanga anoidzwa nadhiabhorosi.
Saka kutevera rubhabhatidzo rwaJesu, kwaakanga akaziviswa Mwanakomana waMwari uyo naBaba akanga unofadzwa, ungatarisira kuti Mweya waMwari kwaizoita Jesu kubvisa zvakaipa naMambo Herodhi, kana zvichida ndimutume zvakananga kuti atange ushumiri hwake rokuparidza uye kuita zviratidzo nezvishamiso. Asi that's haana apo Mweya Mutsvene kunotungamirira naYe. Panzvimbo Mweya Mutsvene kunotungamirira naye murenje. Mweya Mutsvene kunotungamirira naye kunzvimbo chaizvo apo dhiyabhorosi achaita kumuedza.
Zvino zvirokwazvo Mambo, zvose-achiziva Mutsvene anoziva kuti Ari kutungamirira Jesu kunzvimbo chaizvo apo Satani kumuedza - zvakafanana kuti Mweya Mutsvene aiziva munaMabasa 20, kuti akanga achitungamirira Pauro kuJerusarema, uye kuti Pauro vaizotambudzwa uye asungwa ikoko. Anoudza Paul nezvengozi iri pamberi pake, asi constrains Pauro kuenda kuti Angangodaro kuparidza Evhangeri. Izvi hazvina kusiyana. Mweya Mutsvene anoziva kuti Jesu vachakwandwa akasangana uye akashora nadhiyabhorosi, asi Anotungamirira naYe ikoko zvakadaro.
Nei Mutsvene aizotuma Jesu kurenje kwaachanomira kuedzwa? In chiedza God's kuzivisa kuti Jesu ndiye Mwari zvinofadza uye Mwanakomana waMwari, uye Luke's mazita zvinoratidza kuti Jesu mwanakomana waAdhamu uyewo, Muedzo uyu anogadza mamiriro ezvinhu kuti Jesu aratidze kuti iye ndiye akanga achangobva akaparidza kuva. Izvi kunetsana murenje anopa Jesu dariro kuratidza paChake kuva Mwari-munhu.
It's zvakada nzira dzakawanda vakabvuma Miami Heat mwaka uyu. Lebron James ndiye MVP of League, asi chikwata chake can't kukunda Championship. Anobva Cleveland Cavaliers, uye zvikwata pamwe nevamwe vatambi vaviri zvikuru. Zvino vakati chikwata wavanogona kukanda mhemberero huru, dundundu, nekuti vose tarenda zvavanazvo, vachava kuhwina 5, 6, 7 - Zvichida zvakatonyanya - Championships sechikwata. Saka munhu wese akateerera kuzvirumbidza kwavo, they've akanzwa zvose hype pamusoro chikwata ichi Super. Zvino nenguva anotanga vanofanira kuratidza uye kuratidza pachavo. Are iwe hope ichi chinoshamisa chikwata kuti you've akadanidzira pachako kuti uve? Uye nhau vakatarira uye vainyatsoongorora dzavo dzose kutama kuona kana vakanga enhoroondo chikwata wose aitarisira.
Zvakanaka yakafanana fashoni, chikuva yakatogadzirwa Jesu kuratidza Pachake kuti Mwanakomana waMwari. Acharamba kufadza Mwari?
Tinogona kufunga pamusoro Adhamu mubindu. Akanga chakaitwa nomufananidzo waMwari, kuratidza kubwinya God's zvakasiyana nevamwe. Asi zvino muedzi, nyoka anouya kuna Evha uye achinyengedza zvose. Vakasateerera Mwari, tichitenda nhema nyoka pamusoro chokwadi chaMwari. Adhamu haana kuratidza kuti ndiani Mwari wakamuita kuti ave. Tinoona Israeri murenje vachitadza kuteerera Mwari. Tinoona pamusoro ichi uye pamusoro muMagwaro. Mwari anoita munhu uchamukudza, asi munhu anotadza uye asingateereri Mwari.
Saka Adhamu wechipiri kuita chii wokutanga kuita? Jesu kukwanisa kuitei vaIsraeri vakakoniwa kuita? Dhiabhorosi ikauya uye aedze Jesu kwamazuva makumi mana. Jesu anoita kuva ani iye rakaparidzirwa kuva. Jesu anoratidza Pachake kuti Mwanakomana waMwari akauya kuzotiponesa kubva kuzvivi zvedu uye ndiani wedu asina chivi mupristi mukuru. Uye Mweya Mutsvene vakamutuma ikoko kuita izvozvo.
ikozvino, Ini don't kuda kwangu anongedze kusanzwisiswa sokunoreva kuti Mwari pachake akaedza Jesu kuti aite zvakaipa. Kuti ndezvenhema. Asi zviri pachena kwazvo muBhaibheri kuti isu achiedzwa kuita zvakaipa harwuwire kunze God's uchangamire. It's kwete chinhu kuti akaverevedza pasi Radar. Hakuna uye hapana zvose zvakasikwa zviri kunze utongi hwake. Mwari ndiye chose changamire. Hapana munyika kuti chingaitika pasina mvumo Mwari wedu changamire. nemuedzo uyu zvinoitika nemvumo yaMwari. Mwari akabvumira uye akaronga kurishandisa kubwinya kwake kuburikidza naJesu.
Hama nehanzvadzi, James anoita chaizvo pachena kuti kana isu vanoidzwa hatisi achiedzwa Mwari. Asi ziva kuti Mwari ari kubvumira kuti muedzo uye Akaronga kurishandisa kubwinya kwake. Mwari anoshungurudzika yokuti pane masimba zvakaipa munyika kuti vanoedza kurwisana nesimba rake uye pakuedza iwe kubva munzira yakarurama. Asi ziva kuti tempters avo kupindura Baba venyu vari Kudenga. Uye Achashandisa kunyange navo kubwinya kwake.
Zvino ndinoziva kune vazhinji vedu dzimwe nguva tine yakamanikana pfungwa sei isu kukudza Mwari munyika. Tinofunga kuti Mwari ari chete akudzwa mukuteerera paruzhinji dzakadai nekugoverana Vhangeri vavakidzani vedu, kana kupa pekugara, kana kuparidza. Ndinoda kuti muzive kuti izvi hazvisi chete nokuteerera mhando kuti chinokosha. Vose paruzhinji uye pasiri kuteerera nhau kwazvo. Hapana haafaniri kuva vateereri kuitira kuti vakudze Mwari Universe.
Kana tiri toga, uye isu vanoidzwa kuchivi, Mwari akudzwa nokuteerera kwedu. Mwari akudzwa apo isu kudzivisa dzinonyengedza nhema nomuvengi, kutevera mirairo yaMwari wedu wakanaka. Rinokudza kunaka Kwake, uye kuvimbika, uye simba rake rokuponesa vatadzi. Saka hama nehanzvadzi, nguva dzose Mwari anobvumira kuti tiedzwe, nguva ari wakaisirwa kuti vakudze Mwari nokuda kwekutenda naye pamusoro nhema nomuvengi.
Mwari ane chinangwa kubvumira kuti tiedzwe. Muchiitiko ichi Mwari zvinoratidza kuti Jesu asina Mwanakomana waMwari, ndiani anogona kukunda muedzo radhiabhori.
II.Weakness Hakusi An Zvikodzere To nemuedzo
Haana chaakadya pamazuva iwayo, uye pakupera akanzwa nzara.
Sezvo Ishe Jesu anoedzwa, Iye ari simba uye kudzivirirwa pakusava. Mashoko acho ari pachena kuti Jesu achitsanya 40 mazuva. Panoperera avo 40 mazuva Jesu aiva nenzara - inoita mhando pachena; funga pamusoro uchizvinyima zvokudya 40 wose mazuva.
Tinowanzofunga vanoda kufunga Jesu akakwana, asi Akanga asina akakwana. Aiva Mwari-munhu. Pane musiyano. Jesu aiva munhu chaiye. Saka akanga vanosanganawo kuneta, kana kushaya simba, kana nzara. Muchiitiko ichi, Satani anoedza Jesu anodzivirira kamwe sezvo iye ane nzara. Uye vanorwa Jesu zvakananga munzvimbo kuti vatambe vake iyezvino Kurwara.
Iye haangaidzi Jesu ane zvikuru pakarepo ushe, nezvokudya, nezvinhu kuti chaifanira ive. Iye haangaidzi Jesu nezvinhu zvinogona kuva chakakodzera Yake, asi Jesu anoramba pachake. Jesu anoratidza pachake pano, kuva mwanakomana munhu haana kuuya kuzoshumirwa, asi kushumira.
Hama nehanzvadzi, hatifaniri kuva benzi zvakakwana kufunga kuti Satani arege kutirwisa munguva yedu utera. Ndakaverenga mazwi vhiki rino kuti akati, "Mukana anouya chete muchigogodza kamwe, asi muedzo anoteya pamusoro bhero. "Miedzo haasiyi nyore. Muedzo richaramba uye vanopfeka iwe pasi. Kufanana villains ari anotyisa uyo kudzinga vanhu vanobatwa kusvikira pakupedzisira pokumubatira kana kuwana takaneta kumhanya zvimwe. Uye Satani haasi kuenda zvidzore pamusoro penyu munguva muutera. Satani ndiye muvengi wedu!
Izvi zvaizova sehondo kucherechedza kusimba pavavengi vavo, uye vachisarudza kuti aise kure navo. tsime, aihwa, that's kwete ainoita. Apo muchiuto ona utera, kuti ndiyo nguva yakakwana yokuti kurwisa nokuti mukana kubudirira ndiwo yepamusorosoro. Zvakanaka nenzira yakafanana, nyika, nyama, uye dhiabhori musingadi kure nhema dzavo munguva muutera. chokwadi, vachava chete kuzokurwisa zvakawanda.
Saka sei Jesu akakwanisa kukunda muedzo dhiyabhorosi panguva Yake utera? It's chokwadi kuti dhiyabhorosi kumbowana mukana kutungamirira Jesu chivi, asi Jesu haana sei kumukunda? tsime, kana isu akatarisa ndima pazasi, tinoda kuona kuti Jesu akaita chii naAdhamu haana kuita. Jesu aidavira Shoko raMwari, pamusoro Shoko Satani. Jesu akabvuma kuda kwake kuda kwaBaba. Munguva dzokuedzwa, isu shouldn't kuedza kudzivisa nokungonzwawo rokuita kudaro. Nokuti chokwadi tose simba zvakakwana.
Muedzo munguva utera rinotanga nzira pamberi muedzo pachayo. Kudzivisa muedzo uchasangana vhiki inotevera kunotanga svondo rino. Chii chauri uchiwana? Chii Uri kuzadza nokuzvishongedza? Sei Uri zvokudya kutenda kwako? Jesu akanga asina simba. Asi kunyange Jesu akanga usina chawadya, Akanga azere noMweya. Tinofanira kutsvaka, sezvo rinokurudzira Ephesians, zadzwa - uye nokugarwa - Mweya waMwari. Tinofanira kuva zviso zvedu muShoko raKe, apo Anopa uye chinosimbisa kutenda kwedu zvipikirwa zvake. Uye tinofanira kuita izvi pamwe chete nehama dzedu nehanzvadzi mukutenda.
Pane nguva muupenyu hwedu kana tichinzwa simba nokuda kwezvikonzero zvakasiyana-siyana. Tinogona kuva yakaneta, kana mupfungwa vakapedzwa, kana muchirwara, kana zvichida we're saka chokwadi simba redu kuti we're simba asingazivi. Asi pasinei neutera zviri, it's asiri kuzvipembedza kupa mu. Panguva iyi vanotambura vari inopiwa pamusoro muedzi angaita seanotora mwoyo chaizvo, asi Shoko raMwari richiri vechokwadi, uye aSatani chokunyengedza richiri nhema.
Kana wave nomuedzo unzenza kuzviyeuchidza kuti Mwari akati, "Hamuzi venyu, makatengwa nemutengo. Naizvozvo kudzai Mwari nomuviri wenyu. "Uye kana wave pamuedzo kuti nokuzvikudza uye pakuchiva kuzviyeuchidza kuti Mwari akati, "Don't tarisa yedu iwe asi zvinofarirwa nevamwe." Munguva utera tinofanira, saJesu, kunamatira Shoko raMwari nokumuteerera.
Kuverenga ndima iyi taigona kuvimba kune vari mwoyo, kufunga, "Man, Jesu ndiye saka mutsvene Ndinoshuva kuti dai saiye,"kana, "Man, I'm ndangofanana Adhamu wokutanga pane yechipiri. Ndiri kufanana Jona kupfuura Jesu. "Hama nehanzvadzi, kuti ndezvechokwadi muKristu wose uye dzisiri dzechiKristu. Tose zvikuru vakafanana Jona kupfuura Jesu.
Asi chinhu pamusoro kuteerera kwaJesu kuti tinorava pamusoro pano ndechokuti Jesu yakanga isingori murume. Jesu akanga asiri chete mumwe wedu uyo ​​zvakaitika kuva vanoteerera mumwe. Aihwa, Jesu aiva Adam mutsva vaiuya kwatiri kumiririra patsva. Kuteerera kwaJesu kwete chete zvinofadza Mwari iyoyo, asi Jesu anoteerera kwatiri kuti taikwanisa kuva zvinofadza kuna Mwari. Jesu anoita chii isu couldn't kuita. Iye anopfuura miedzo kuti Adhamu aisagona kupfuura uye kuti vaIsraeri vaisagona kupfuura - uye kuti hapana munhu asati kana pashure pake aigona kupfuura. Jesu anoteerera apo hapana wedu aigona. Jesu akakunda vavengi hapana wedu aigona kukunda. Uye ichi kunyanya kukundwa, mugwenga, akanga achinongedzera rinokunda kukundwa Satani kuti zvichaitika pachapera Luke's vhangeri.
Kunyange zvazvo Jona akanga zvokutadza youtsinye kunyange kuparidzira vavengi vake, Ishe Jesu akauya pasi pano uye akafira vavengi vake. Pamuchinjikwa Jesu akaripira nguva dzose chete kuti isu takasiya nomuedzo. Rega nguva. Nokuti mutendi, hakuna chivi yedu kuti Jesu haana kubhadhara. Zvino Jesu akamuka kubva muguva, akundwe chivi, rufu, uye dhiabhori. Dhiabhorosi akakundwa. Uye kana isu aizosiya zvedu uye kutenda kwedu muna Kristu isu tinogona kugamuchira zvose mibayiro kuti vaiwana. Kuona kuteerera kwaJesu hazvifaniri kutiodza mwoyo, Zvinofanira anotikurudzira.
vhiki rino kana muchiedzwa kutadza, yeuka kuti muvengi wako watopiwa vakundwa Ishe wenyu. Unofanira don't kupa kuti chivi chenyu. Muedzi yakatobuda akarasika. maketani Your yatyorwa. Famba rusununguko yakatengwa kwamuri panguva muchinjikwa. Don't kuedzwa zvinorayirwa muvengi akakundwa. Jesu akafa uye akamukazve, kuti taizova kupikisa muedzi, mutarire saIye. Tiri indwelled pamwe chaizvo iwoyu uye isu kuashandisira chombo zvikuru chete.
Kana tikaedzwa, let's yeuka kuti Mwari anobvumira uye anoshandisa muedzo, kuti utera hachisi chimwe chikonzero nemuedzo, uye kuti muedzi kare vakundwa.
Munyori VaHebheru anotarisa muedzo uyu uye anowana kurudziro huru:
Nokuti hatina mupristi mukuru asingakwanisi kunzwira tsitsi kusava nesimba kwedu, asi tine munhu Wakaedzwa munzira dzose, sezvo tiri -Asi akanga asina chivi. Ngatikurukurei zvino kuchigaro cheushe chenyasha nechivimbo, isu kuitira kuti vagamuchire ngoni uye tiwane nyasha kutibatsira munguva yedu yokushayiwa. (Hebrews 4:15-16)
Ishe Jesu anogona kunzwira tsitsi nesu. Ange akaedzwa sezvo tikaedzwa, asi Haana nokusingaperi akapa nokuita naYe zvakakwana mupristi mukuru. Saka tinogona kutaura chake choushe nechivimbo, aikumbira tsitsi uye nyasha. Let's kuenda kwaari zvino.
Jem973 • Gumiguru 29, 2013 pa 2:26 pm • pindura
Ndinokutendai zvikuru dzidziso ! Zviri zvikuru kuziva zvakadini Mwari wedu anoziva miedzo ose tinotarisana ! Zviri zvikuru kuziva kuti Jesu ave akaedzwa pasina akapa mukati, uye kuziva kuti dhiabhorosi anokurirwa !!
Ndinokutendai zvikuru nokuda kwokukurudzirwa ! Mwari ropafadzai ushumiri hwako uye hwemhuri yako.
(Sorry wangu Chirungu, Ndiri French)